पत्रकार माथि खनिए मेघा र बिकाशको छिमेकि, बाहिरियो बास्तबिकता…(हेर्नुहोस् भिडियो) – PathivaraOnline
Home > समाचार > पत्रकार माथि खनिए मेघा र बिकाशको छिमेकि, बाहिरियो बास्तबिकता…(हेर्नुहोस् भिडियो)
पत्रकार माथि खनिए मेघा र बिकाशको छिमेकि, बाहिरियो बास्तबिकता…(हेर्नुहोस् भिडियो)
काठमाडौं – बिराटनगरी मेघा घिमिरे अहिले उपचारको लागि काठमाण्डौमा आइपुगेकी छन् । उनी करेन्ट लागेर दुबै हाट गुमेपछि थप उपचारको लागि काठमाण्डौ आइपुगेकी हुन् । बिराटनमै रहेको घरमा आज भन्दा ३ बर्ष अगाडी मेघालाई करेन्ट लागेको थियो ।
अहिले भने उनि आफ्नी आमाको साहारामा उपचारको लागि काठमाण्डौ आइपुगेकी हुन् । उनले आफ्नो उपचारको लागि धेरै ठाँउबाट सहयोग आउन थालेको पनि बताएकी छन् । ‘म उपचारको लागि काठमाण्डौ आएकी हु’ उनले भनिन्, ‘अहिले भने सामाजिक सञ्जालबाट मेरो अवस्थाको बारेमा थाहा पाएर धेरैले सहयोग गर्न थालेका छन् । पत्रकार माथि खनिए मेघा र बिकाशको छिमेकि, बाहिरियो बास्तबिकता…हेर्नुहोस् भिडियो….
जता लाग्यो त्यतै पार्टी फुटेपछि डा. बाबुराम भट्टराईको जीवनमा बैशाख १३ मा घटेको नसोचेको घटना घटेको खुलासा ! (भिडिय सहित)
ए नारान ! टाईसुटमा ठाँटिएका एनआरएनको पाँच तारेमा बिर्सनै नसकिने यस्तो उपद्रो !